त्रिभुजीय शिक्षाले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्छ | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / त्रिभुजीय शिक्षाले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्छ
त्रिभुजीय शिक्षाले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्छ
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता October 10, 2018	0 776 Views
पथिक फाउन्डे शन ने पालका कार्यक्रम संयोजक
परम्परागत शिक्षा प्रणालीले बे रो जगार जनशक्ति थुपानेर् काम गरे को भन्दै स्वरो जगार र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जो ड दिन त्रिभुजीय शिक्षामा जो ड दिइएको छ । काठमाडौ ंमा स् थापना भएको पथिक फाउण्डे शनले त्रिभुजीय शिक्षाका लागि बहसको थालनी गरे को छ । आफैमा कम्युन र आध्यात्मिक परिवे शमा हुर्कदै गरे को फाउण्डे शनले ने पाली शिक्षा प्रणालीमा कस् तो परिवर्तन ल्याउन खो जिरहे को छ त ? यसै सन्दर्भमा फाउण्डे शनका कार्यक्रम संयोजक टोपेन्द्र खनालसँग युगबो धकर्मी जे .एन.सागरले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षे प यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । – सम्पादक
पथिक फाउण्डे शनले के गर्छ ?
फाउण्डे शनले अहिले बहुउद्दे श्यीय कामहरुको थालनी गरे को छ । खासगरी शिक्षा, स् वास् थ्य र आध्यात्मिक विषयमा काम गरिरहे को अवस् था छ । सगसगै हामीले सामूहिक जीवनशै ली, अर्गानिक फार्मिङ गाईपालनको काम पनि गरिरहे का छौ ं । करिव १५ वर्षदे खि काठमाडौ ंको सतुङगल क्षे त्रमा काम गरिरहे को छ । पथिक फाउण्डे शनको नाममा ०६८ सालदे खि दे खिए पनि पहिले दे खि नै यसले काम गरिरहे को थियो  । मुख्यरुपमा यसले अध्यात्मको माध्यमबाट मानव चे तनाको विकास गनेर् काम गरिरहे को छ ।
आर्थिकरुपले कसरी चल्छ फाउण्डे शन ?
गाह्रो त छ । आध्यात्मिक संस् थाहरु चलाउने ट्रे ण्ड भने को कसै ले दान, दक्षिणा दिएर नै हो  । गुठी बनाएर पनि चलाउने गरिएको छ । तर हामीले अलि फरक हिसाबले चलाएका छौ ं । अलि वै ज्ञानिकढंगले चलाउने प्रयास गरेका छौ ं । पू“जी, श्रम, उत्पादन प्रक्रिया र अध्यात्मलाई हामीले एकै ठाउ“मा जो डे र अघि बढे का छौ ं । हामी श्रममा पनि जो डिएका छौ ं । उत्पादनसग पनि जो डियौ ं । कृषि उत्पादन गर्छांै आफै  । आफै पनि हामी विभिन्न दक्षतासहितका व्यक्तिहरु छौ ं । को ही डाक्टर, को ही इञ्जिनियर, को ही प्राविधिकहरु छौ ं । यी सबै मान्छे हरु कृषि उत्पादनमा लागे का छौ ं । जसले हाम्रो गास, वासका लागि अरु कसै को मुख ताक्नुपनेर् अवस् था छै न । हामी कम्युन जीवनशै लीमा बा“चे का छौ ं । जसले सामूहिकतामात्रै हो इन एउटा चे तनाको विकास समे त गरे को छ ।
एकल परिवार र स्वार्थ मौ लाइरहे को बे ला कम्युन कसरी टिकाउनुहुन्छ त ?
हामीले अध्यात्मलाई अ“गाल्दा धनलाई बे वास् ता पनि गरे का छै नौ ं । त्यसै ले एउटा खुट्टा ध्यान वा अध्यात्म हो भने अकोर् खुट्टा धन हो  । यसलाई अझ हामीले के भन्छांै भने पूर्वको ज्ञान र पश्चिमको प्रविधि अर्थात धनलाई पनि आत्मसात गरे का छौ ं । नै तिकता, ज्ञान, ध्यान र अध्यात्मको माध्यमबाट भित्रबाटै उत्पादन गनेर् र बाहिरबाट धनको आर्जन । त्यसै ले भित्र र बाहिर दुबै बलियो भयो भने मान्छे ले शान्तिको महसुस गर्छ । बाहिरी जीवनले मात्रै पश्चिम छटपटाइरहे को छ ।
धन त छ तर उस“ग खो क्रो पन पनि स“गै छ । उसमा नै तिकता, शान्ति पनि चाहिन्छ । त्यो खालको चे तना अध्यात्मले मात्रै दिन्छ । जुन अन्धविश्वासी हो इन शुद्ध वै ज्ञानिक अध्यात्मले मानिसमा चे तनाको विकास गर्छ । कसरी गर्छ त भन्दा ध्यान र यो गका माध्यमबाट हुन्छ । कस् तो चे तना त भन्दा मानवीय चे तना । एउटा डाक्टरले मृगौ ला प्रत्यारो पण गरे र जीवन दिन्छन् । तर मृगौ ला निकालिदिए भने त जीवन सकिन्छ नि  । त्यसै ले यी सबै पक्षलाई आत्मसात गरे र हामी सामूहिकता र अध्यात्मलाई जो डे र अघि बढे का छौ ं ।
समाज साघुरिदै गइरहे को बे ला तपाइ“हरु सामूहिकतातिर जादै हुनुहुन्छ सम्भव छ हो ला र ?
यो पनि चे तनाले नै निर्धारण गनेर् कुरा हो  । पहिला पहिला मान्छे हरुले सामूहिकतामा ल्याउने प्रयास गथ्यौर् ं । जुन बन्दै नथ्यो जबर्जस् ती गरिन्थ्यो  । हाम्रो चे तना सामूहिक नै हुन खो ज्छ । तर त्यो चे तना एक ठाउ“मा गएर फस् यो  । चे तना आत्मके न्द्रित हुन पुग्यो  । जति आत्मके न्द्रित हुनपुग्यो । त्यति तनाव पनि बढ्यो  । जस् तो मान्छे ले घर बनाउ“छ त्यसपछि पर्खाल खो ज्छ । मान्छे जति व्यक्तिगत सम्पत्ति जो ड्छ त्यसको ५० प्रतिशत दुःख त्यसको संरक्षणमा खर्चिन्छ । यी सब गतिविधिले मान्छे आत्मके न्द्रित हु“दै गएको दे खिन्छ । तर मान्छे एकअर्कास“ग जो डिएको छ । जस् तो हामीले लिने अक्सिजन विरुवाबाट आउछ । तर तपाइले सिलिण्डरको अक्सिजनले त जीवन चलाउन सक्नुहुन्न । त्यसै ले तपाइ“को कने क्सन विरुवासग छ । तपाइलाई यो कुराको महसुस भयो भने मे रो आधा फो क्सो त विरुवासग छ भन्ने सो च्नुहुन्छ । यो संवे दनशीलता तपाइ“ले प्राप्त गर्नुभयो भने तपाइले आफ्नो स् वार्थका लागि रुख काट्न सक्नुहुन्न । त्यसै ले तपाइ“मा त्यो संवे दनशीलता जागृत भयो भने अथवा समाजका अरु मान्छे पनि मे रा लागि हुन् भन्ने कुराको महसुस भयो भने सामूहिकता कसले नकार्न सक्छ र ? त्यसै ले यथार्थ के हो भने न तपाइ‘“ आत्मनिर्भर हो न त परनिर्भर । तपाइ“ अन्तरनिर्भर हो  । यो कुराको बुझाइले सामूहिकताको परिकल्पना गरिएको हो  । हामीले जुन कम्युनको अभ्यास गरिरहे का छौ ं । समाजलाई दे खाउन पनि हो  । एउटा मान्छे ले म मे रो धनले बा“च्छु भन्छ तर उसलाई अरु मान्छे चाहिन्छ । धनले बाच्न सकिदै न । छिमे की चाहिन्छ, समाज चाहिन्छ त्यो कहा“ छ त भन्दा सामूहिकतामा छ भन्ने हिसाबले हामीले कम्युनको अभ्यास गरे का छौ ं ।
शिक्षामा नया कुरा ल्याउनु भा हो र ?
पथिकले प्रस्ताव गरे को शिक्षा त्रिभुजीय शिक्षा हो  । खासगरी ने पालमा गरिवी, बे रो जगारीको समस् या छ । पढिसके पछि पनि बे रो जगारीको समस् या भो ग्नु परे को छ । डिग्री ले वलको अध्ययन गर्दा त १६÷१७ वर्ष लगानी गरे को छ । १७ वर्षसम्मको लगानी गरे र पनि साउदी, कतार जानुपर्छ भने त्यो भन्दा बिडम्वनाको कुरा के हुनसक्छ ? यस् तो अवस् था आउनुमा विद्यार्थीको कमजो रीले हो इन । उसलाई यस् तो सा“चो मा हालियो जसले गर्दा ऊ १७ वर्षपछि पनि के ही गर्न नसक्ने पंगु मान्छे बन्यो  । त्यसै ले प्रचलित शिक्षा किन यस् तो भयो त भन्दा यो सूचनामुखी भएको कारणले हो  । उसले गुरुले दिएका सूचना घो क्ने मात्रै काम गर्छ । जीवन उपयो गी सीपहरु नसिके रै ऊ लक्का जवान हुन्छ र ऊ व्यावहारिक हुन सक्दै न । अकोर् कुरा हाम्रो समाजले के भन्छ भन्दा तिमी कुन जातका हौ , कुन धर्मका हौ , कुन राष्ट्रियताका हौ , कुनै तिमी लिंग, वर्गका हौ , धनी, गरिव, यो वा त्यो पार्टीका हौ  । यस् ता कुराहरुले उसको दिमाग भरिएको छ । त्यसै ले ऊ हजार दिशामा खण्डित छ ।
जब ऊ आफै खण्डित हुन्छ नि उसको खुशी भा“डिन्छ । सामाजिक, सांस् कृतिक शिक्षाले हामीलाई खण्डित गरे को छ यसलाई करे क्सन गर्न सकिन्छ भन्ने हो  । यी दुबै कुरालाई करे क्सन गर्न मानवीय शिक्षा आवश्यक पर्छ । हामी जात, धर्म, वर्ण, लिंग, क्षे त्र हुनुभन्दा पहिले मानव हौ ं । यो कुरालाई बुझाउन जरुरी छ । यो त्रिभुजीय शिक्षाको पहिलो भुजा हो  । अकोर् भुजा भने को जुन परम्परागत सूचनामुखी शिक्षा छ यसलाई दक्षतामुखी वै ज्ञानिक शिक्षामा परिणत गर्नुपर्छ । यसले के गर्छ भन्दा कक्षा एकदे खि नै विद्यार्थीको रस, रुचि जुनमा छ त्यो दिशामा पठनपाठन गदैर् लगियो भने कक्षा १२ पास गर्दा ऊ हो नहार प्रतिभाशाली भएर निस् िकन्छ । किनकि त्यो विषयमा उसको रुची छ । त्यसै ले शिक्षक, शिक्षा नीति, पाठ्यक्रम त्यो हिसावले टे «ण्ड गनेर् हो भने ने पालको शिक्षाको अवस्था आमूलरुपमा परिवर्तन हुन्छ र जुन खालको बे रो जगारीको समस् या छ त्यसको अन्त्य भएर जान्छ । किनभने जनशक्ति उत्पादन भयो भने ने पाल स्रो तको हिसावले धनी दे श हो  । स्रो त यही छ जनशक्ति दक्ष उत्पादन भयो भने यही जस् तो सुकै काम गरे र खान सकिन्छ । ते स्रो कुरा के हो भने चे तनाको शिक्षा । मान्छे पदार्थ मात्रै हो इन, ऊसग चे तना पनि छ । त्यो चे तनालाई खुराक पुग्या छै न । त्यसै ले मान्छे ले आत्महत्या गरिरहे को छ । त्यसै ले मान्छे दुव्र्यसनमा फसे को छ । त्यसै ले मान्छे तनावमा छ । मान्छे लाई बा“च्ने कलासहितका विभिन्न तीनवटा कला सिकाउन सकियो भने मान्छे जहा“ पनि टिक्न सक्छ ।
यो सबै कुराको शुरुवात कहाबाट गनेर् त ?
पहिलो कुरा यो आवश्यकता हो कि हो इन भने र बहसमा लै जान खो जे का छौ ं । त्यसै ले मिडियामार्फत गर्न खो जे को कुरा के हो भन्दा यो विषयलाई बहसमा लै जाने हो  । हामी सुतुरमुर्गशै लीमा सुते र बसे र त के ही हु“दै न । त्यसै ले जो शै क्षिक अभियानमा लागे का छन् उनीहरुलाई यस् तो बहसमा ल्याउन खो जिरहे का छौ ं । जसले चिन्तन मनन गरो स् । दो स्रो चाहि“ अभिभावकमा पनि सचे तना पु¥याउन खो जिरहे का छौ ं । अभिभावकले सन्तानको संरक्षण त गरिरहे का छन् । तर उनीहरु दुव्र्यवसनमा फस् दै छन् कि ? वा अभिभावककै बानी व्यहो राले बच्चाहरुले के सिक्दै छन् ? भन्ने कुरालाई अभिभावकहरुलाई कसरी जिम्मे वार बनाउन सकिन्छ भन्ने तिर हामी लागे का छौ ं । मै ले कस् तो मान्छे उत्पादन गदैर् छु ? भो लि बाआमालाई वृद्धाश्रममा लगे र ठे क्का दियो भने त सन्तान गलत जन्माएछु भन्ने मात्रै हो ला अहिले नै कसरी जिम्मे वार नागरिक बनाउने भन्ने विषयमा अभिभावक पनि लाग्नुपर्छ । उहा“हरुलाई जागरुक बनाउने काममा हामी लागे का छौ ं ।
अनि स्वास्थ्यमा गर्न खो जे को के हो ?
अहिले तपाइ“ बजारमा जानु भयो भने पाचवटा किराना पसलपछि एउटा औ षधि पसल भे टिन्छ । औ षधि पनि दै निक उपभो ग्यवस् तु जस् तो भइसके को छ । स् वास् थ्य समस् या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । ट्याव्ले ट खाएर स् वास् थ्य धान्ने जुनखाले नीति छ यो खतरनाक छ । हाम्रो जुन जीवनशै ली छ खानपान, आहारविहार यी सबै को कारणले रो गहरु आइरहे का छन् । २५ सय वर्ष पहिले गौ तम बुद्धले के भन्नु भएको थियो भने स् वास् थ्य एक्लै प्राप्त गनेर् वस्तु हो इन । तपाइले गनेर् कर्म, व्यवहार, आचरण यी सबै स“ग स् वास् थ्य जो डिएको छ । त्यसै ले शरीर, मन र चे तनाको सामन्जस् यता हुने गरी स्वास्थ्यलाई सम्बो धन गर्न सकियो भने मात्रै स् वस् थ भइन्छ । स् वस् थ हुनु भने को रो गबाट मुक्ति हुनु हो इन । ऊ मानसिकरुपमा विक्षिप्त छ । तर शारीरिकरुपमा रो ग छै न भने पनि ऊ स् वस् थ मान्छे हो इन । त्यसै ले पथिक फाउण्डे शनले एकीकृत स् वास् थ्य पहुचको कुरा गरे को छ ।
त्यसै ले त्यसमा आयुवेर् द पनि आउनुपर्छ त्यसमा, अध्यात्मको ध्यान पनि जो डिनुपर्छ भने यो ग, प्राणायाम, हो मियो प्याथी पनि जो डिनुपर्छ । कसले कहाबाट असल से वा दिनसक्छ । यसमा एलो पे थिक पनि जो डिनुपर्छ । तर शुरुमै हो इन । ग्याष्ट्रिक भयो शुरुमै एलो पे थिक खाने हो इन । ग्याष्ट्रिकको समस्या खानपान र रहनसहनको कारणले आएको समस् या हो  । त्यसै ले खानपान, रहनसहन सुधारे र पो उपचार हुनसक्छ । औ षधिले स् वास् थ्यको संरक्षण हुदै न भन्ने कुराको सचे तना फै लाउने काम फाउण्डे शनले गर्न खो जिरहे को छ । मान्छे हरुले दिनभरि मनलाग्दी खाने अनि साझ ट्याव्ले ट खाएर समाधान खाज्ने बानी छ । औ षधिको साइड इफे क्ट हुन्छ । औ षधिले काम गरे कै छै न । त्यसै ले हामी त्यहा“बाट फर्किनुपर्छ है भन्ने मा सचे तना फै लाउन लागिरहे का छौ ं । हामी आरो ग्य पथमा लाग्नुपर्छ ।
तपाइ“हरुले नियमित यो गाशन गर्नुभएको छ भने तपाइ“को ५० प्रतिशत रो गको निदान अग्रिम गरिसक्नु भएको छ । त्यसले पाचनशक्ति, प्रतिरो धात्मक शक्तिको बृद्धि गदैर् जान्छ ।
कम्युन, आयुवेर् द र अध्यात्म सगसगै कसरी जान्छन् ?
प्रचलित परिभाषा जुन छ कम्युनको त्यो कम्युनिष्टबाट आएको छ । तपाइ“लाई थाहा छ कम्युनिष्ट फिलो सो फीले ने पालमा लामो समयदे खि काम गरिरहे को छ । माक्र्सवादी सिद्धान्तले के भन्छ भने बर्गविहीन अवस् थामा कम्युनको कल्पना गर्न सकिन्छ भन्ने हो  । त्यो अनुसारको न वर्ग छ न बने का कम्युन रहन सके का छन् । कार्ल माक्र्सले धनी र गरिवबीचको ग्याप छ त्यसलाई समाप्त गनेर् भन्नुभयो । तर त्यो समाप्त गनेर् कुरामा अलिकति कमजो री रह्यो  । मानिस गास, बासमा मात्रै
अड्किदै न । शुरुमा गास, बासको आवश्यकता हो । त्यसपछि उसले स् वतन्त्रता खो ज्छ । प्रे म खो ज्छ । मानसम्मान खो ज्छ । मान्छे का थुप्रै आवश्यकता छन् । जब एउटा आवश्यकता पूर्ति हुन्छ त्यसपछि ऊ स् वाभाविकरुपमा अकोर् आवश्यकता अगाडि ल्याउछ । बिभिन्न आवश्यकतामध्ये उसलाई चे तना, ज्ञानको आवश्यकता पर्छ । खान, लाउन त सबै ले पाएका छन् । म जन्मिएको किन ? जीवनको अर्थ खो ज्न थाल्छ मान्छे ले । जीवनको अर्थको उत्तर अथवा चे तनाको ज्ञान अध्यात्मले दिन्छ । नमिले जस्तो लाग्छ कि त्यही मान्छे पदार्थमा पनि छ र चे तनामा पनि । उसलाई रो टी पनि चाहिएको छ र शान्ति पनि । रो टी र शान्तिबीचको कने क्टिभिटी कम्युन र अध्यात्म हो  ।
कसरी लागु गनेर् त ?
हो  । गाह्रो छ । अहिले कै अवस्थामा गाह्रो छ । तर पहिले त यो आवश्यकता हो कि हो इन भन्ने कुरालाई स् थापित गर्नुपर्छ । त्यसै ले पथिक फाउण्डे शनले त्यसको शुरुवात गरे को छ । हामी अहिले दे शका विभिन्न स् थानमा पुगे र यो विषयमा छलफल गरिरहे का छौ ं । दाङलगायत धे रै जिल्लामा हामी पुगिसके का छांै  । यसलाई बहसमा लै जानुपर्छ । यदि यो आवश्यकता हो भन्ने लाग्यो भने कुनै दिन सबै ले आत्मसात गनेर् छन् ।
Previous: दशैं सांस्कृतिक पर्व हो
Next: नीतिले राजनीतिक दललाई निर्देश गर्ने दिन कहिले आउला ?